🥇 ▷ Flop Rocket, hawlgallada booska gudaha godka loogu talagalay iPhone ✅
Flop Rocket, hawlgallada booska gudaha godka loogu talagalay iPhone
Flop Rocket waa tartan aan dhamaad lahayn oo loogu talagalay iPhone iyo iPad
Waxaa laga heli karaa App Store, dukaanka app ee Apple, ciyaarta Flop Rocket ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Ciyaartaani xiisaha badan waxay kugu qaadan doontaa khibrad cajiib ah god gudaheeda, oo leh cadow aan tiro lahayn iyo ficil badan. Baro dhammaan astaamaha ciyaartaan oo kala soo bixi hoos.
Waa maxay Flop Rocket ee aaladaha macruufka?
Tijaabo Rocket Flop ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada iyada oo loo marayo god 5-kiiloomitir ah oo ay ka buuxaan cadaawayaal loo yaqaan Spaceducks, kuwaas oo lamid ah dawacooyinka, Gooryaanka dhagaxa weyn iyo astaamaha kale ee aad ka heli doontid waqtiga-waqtiga oo ay tahay inaad iskudaydo inaad ka fogaato, howshaada waxay sameyneysaa qayb ka mid ah boos barnaamij aan maalgelintiisu ku filnayn. Maxuu barnaamijka barxaddan god ugu jiraa? Su’aal wanaagsan, waxaad ogaataa inta lagu guda jiro halgankan.
Waxaa ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee ciyaartan oo aad ka heli karto:
Waa fududahay in la isticmaalo, laakiin makaanikada adag.
Ergooyinka waxay u soo saarteen si aan kala sooc lahayn oo bixiya tartan kasta oo kala duwan.
4 raadad si aad u cusbooneysiiso, waxaad abuuri kartaa markabkaaga si uu ugu duulo sida riyada.
Ururi awood koronto si kor loogu qaado fursadaha bilow guul leh.
Is dhexgalka BscotchID, tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad saaxiibo sameysato oo aad aragto maraakiibtooda burburay inta ay duulayaan.
Iskuday ciyaarta si bilaash ah (oo lagu maalgeliyo xayeysiin).
Waxay leedahay nooc qaali ah iyada oo loo soo iibsanayo gudaha-app.
Waa muhiim in nooca lacagta ah ee ciyaarta ay leedahay xulashooyin badan, sida: 8 raad-raac oo dheeri ah, waxaad ku guuleysan kartaa laba jeer qadaadiicda badan oo aad kor u qaadi kartaa gantaalkaaga laba jeer si dhakhso leh, waxaad ku ciyaari kartaa hawlgallo hub dheeri ah, bambooyin dheeri ah iyo kabasho kaabsal baxsad, waxaad marin uheli kartaa adeegyada qaddarka BscotchID mana arki doontid xayeysiisyo badan.
Muxuu ku cusub yahay nooca 2.0.13 ee Flop Rocket
Noocan cusub waxaa ku jira horumarinnada soo socda:
Xaaladda aan dhamaadka lahayn: Markaad gaarto meel bannaan, u qaado floprocketry-kaaga dhammaystiran habka cusub ee dhammaadka lahayn. Waxay ka dhacdaa god ku dhow dhow oo cadow badan leeyahay.
Muusig: Waxaa lagu daray ikhtiyaarka aamusnaanta isweydaarsiga ciyaarta, ee loogu talagalay kuwa jecel inay ku ciyaaraan aamusnaanta.
Kordhinta jilicsanaanta shaashadda illaa 27.3%.
Boodhadhku waxay hada muujiyaan shucuur.
Stalagmites hadda ka dib ma muujiyaan shucuur.
U soo dejiso Flop Rocket for iPhone iyo iPad
Ha seegin tan Ciyaar ficil iyo ciyaar toogasho ah oo loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada, waxaad kala soo bixi kartaa khadka tooska ah ee tooska ah, kana soo degso App Store, oo aad ka heli doonto hoosta.
Gantaal Flop ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 5.1.1 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadda: Ingiriisiga.